शनिबार, २७ असार २०७७, ०१ : ३८
नेपालमा भनाइ नै छ– ‘गीत हिट त फिल्म सुपरहिट ।’ तर, पहिलो पल्ट कुनै फिल्मलाई यस्तो समस्या परेको छ, जहाँ गीत त हिट छ तर कुन फिल्मको भन्ने बुझाउन नसकेर हैरान ! त्यसैले गीत हिट भए पनि फिल्मलाई खासै फाइदा पुगेको छैन ।
एक समय थियो, स्टारडमकै भरमा फिल्म चल्थे । फिल्ममा नयाँ अनुहार बिरलै देखिन्थे । राजेश हमाल, निखिल उप्रेती, विराज भट्टलगायत नाम धेरै निर्माता÷निर्देशकको रोजाइमा पर्थे । तर, अहिले समय फेरिएको छ ।
कुनै समय रेखा र आर्यन सिग्देलको दुश्मनी एउटाले हिँडेको बाटो अर्को हिँड्न नमान्ने तहसम्मको थियो । सामान्य शिष्टाचार त परको कुरा ! झगडाको चुरो के थियो ? कसैलाई थाहा छैन तर दुवैबीच गहिरै दुश्मनी थियो ।
सेटमा पनि रोमान्स
सौगात मल्ल र सृष्टि श्रेष्ठबीच गहिरो प्रेम रहेको कुरा कुनै सेक्रेट रहेन अब । भर्खरै मात्र पनि सृष्टिले सौगातलाई घरमै डिनर खुवाएको फोटो बाहिरिएबाट पनि पुष्टि हुन्छ, दुवैको मायाप्रेम ख्यालख्यालको हैन । तर, उनीहरूको प्रेमले सुटिङमा नै खलल पुर्याएको हल्ला बाहिरिएको छ ।
अनुपविक्रम शाहीलाई फिल्मको खाँचो छैन । त्यसो त ‘हँसिया’यता उनको भूमिका कसैले नोटिस गरेका छैनन् । तर, जहाँ हट्टाकट्टा केटाको खाँचो हुन्छ, निर्माता÷निर्देशकले उनैलाई सम्झन्छन् ।
मेनुकाको तालुमा आलु
अभिनय गरेको लामो समयसम्म पनि मेनुका प्रधान धेरैको आँखामा पर्न सकेकी थिइनन् । उनको अभिनय चल्दा फिल्म चलेनन् र फिल्म चल्दा अभिनय चलेन । तर, यस्तो लाग्छ मेनुकाका दिन फिरेका छन् ।
आँचलको बेला आएको हो ?
‘नाइँ नभन्नू ल ४’ बाट पल शाह र वर्षा राउतसँगै डेब्यू गरेकी थिइन्, आँचल शर्माले । सँगै डेब्यू गरेकी वर्षा राउतले तीन–तीनवटा हिट फिल्म दिइन् । साम्राज्ञीराज्यलक्ष्मी शाहसँगै वर्षाको स्टारडमको तुलना हुने गरेको छ ।
‘‘नुमाफुङ’ हेरेपछि केटीहरू बोल्न छाडे’
दुई दशकयता नाटक र फिल्ममा सक्रिय अभिनेता हुन्, प्रेम सुब्बा । उनले ‘नुमाफुङ’, ‘बलिदान’, ‘निशानी’ लगायत ५० भन्दा बढी फिल्ममा अभिनय गरेका छन् ।
नम्रता सापकोटाका फ्यानका लागि खुशीको खबर छ । ‘छक्का पन्जा’ यता कुनै फिल्म नपाएकी नम्रतालाई श्वेता खड्काले आफ्नो ब्यानरमा अनुबन्ध गरेका चर्चा छ ।
‘थ्री लभर्स’मा सानो भूमिकामा अभिनय गरेकी थिइन्, पूजा शर्माले । उनको भूमिका कसैले ‘नोटिस’सम्म पनि गरेको थिएन । तर, निर्देशक सुदर्शन थापाले भीडमा पनि उनलाई चिने । त्यसयता निरन्तर उनलाई लिएर सुदर्शनले ‘मधुमास’, ‘चंखे शंखे पंखे’ र ‘प्रेमगीत’बनाए ।
‘मिस नेपाल हुनेबित्तिकै मिस वल्र्डमा पठाइनु ठीक होइन’
‘मिस नेपाल २०१४’ सुविन लिम्बू अध्ययन र सामाजिक कार्यमा व्यस्त छिन् । उनी बास्केट बल र तेक्वान्दो खेलाडी पनि हुन् । उनीसँग सौन्दर्य प्रतियोगितामा केन्द्रित भएर गरिएको संवाद।
पर्दामा हिँडेरै अमेरिका पुग्नेको कथा
निर्देशक दीपेन्द्र के खनाल आफ्नो नयाँ फिल्ममा तीन पात्रलाई हिँडाएरै अमेरिका पुर्याउने तयारीमा जुटेका छन् । नाम नजुराइएको फिल्ममा निर्देशक खनालले अभिनेता खगेन्द्र लामिछानेसहित अन्य दुईलाई हिँडाएरै अमेरिका पुर्याउन लागेका हुन् ।
भिडियो हिट, अडियो फ्लप
फिल्म जेसुकै होस्, निर्माता–निर्देशकले फिल्मी गीतको भिडियोमा भने उदारतापूर्वक खर्च गर्न थालेका हुन् ।
प्रियंकाको बचाउमा आयुष्मान
प्रेमका धेरै वटा लक्षण हुन्छन् । त्योमध्ये एउटा हो, एउटालाई चोट लाग्दा अर्कोलाई दुख्ने । शहरका नयाँ लभ बड्र्स प्रियंका कार्की र आयुष्मानले यस्तै लक्षण देखाएका छन् ।
प्रेमी फेर्न माहिर हिरोइनमध्ये पर्छिन्, नम्रता श्रेष्ठ । रेमनदास श्रेष्ठ, डिजे तान्त्रिक, प्रेम घलेपछि पछिल्लो समय नम्रता स्टिभन दावा शेर्पासँग अफेयरमा छिन् । दावासँग उनको प्रेम नङ–मासु भनेजस्तै छ ।
रंगमञ्चमा बुढो बाघको गर्जन
मण्डला थिएटर वैशाख ८ गते, समय ५ः३० बजे । उद्घोषकले नाटक सुरु हुन लागेको संकेत गर्दै ‘इन्द्र बहादुरको कथामा आधारित’ उच्चारण गर्न पाएका थिएनन्, कतै माथिबाट आवाज आयो, ‘इन्द्रबहादुर राई भन ।’
बेरोजगार राते काइँला
एक समयका नम्बर वान भिलेन हुन्, सुनील थापा । वर्षमा बन्ने ४०/५० वटा फिल्ममध्ये ३०/३५ मा उनकै भूमिका हुन्थ्यो ।
‘पुरेत्याइँ गरियो, भ्यागुती भइयो’
अभिनेता नाजिर हुसेनले रंगमञ्च हुँदै नेपाली फिल्मको यात्रा तय गरेका हुन् । उनले विविध खालका चरित्र निर्वाह गरेका छन् ।
‘नेप्टे’ बन्दै दयाहाङ
अभिनेता दयाहाङ राईले फिल्म ‘नेप्टे’ मा अभिनय गर्ने तय भएको छ । मंगलवार राजधानीमा एक कार्यक्रमबीच ‘नेप्टे’को निर्माण घोषणा गरियो ।